4 Billood jir - Somali Kidshealth
4 Billood jir
05/06/2013 05/06/2013 by admin
Dhallaanka afarta billood jiraa waxay soo gaaraan waqti uu jirkoodu aad u korayo, waayo ugu yaraan miisaanka cunnugu hadda waa labo jibaarmay dhalashadiisii ka dib. Haddii aad welwel ka qabto miisaanka ilmaha oo aan kordhin la kulan dhaqtarka carruurta.
Xilligaan carruurtu waxay ku muujiyaan darreenkooda dhoola-cadayn iyo haddaaq naxariisi ku dheehan tahay. Waxay ilmuhu hadda isticmaalayaan gacmahooda oo wada shaqaynaya, waayo waxay qabsan karaan oo ruxi karaan shay kasta oo horyaala sida boonbalooyinka.
Cilmi-baarayaasha carruurtu waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu hadda fahmi karo luuqada aasaasiga ah ee hooyada. Laga bilaabo hadda ilaa 6da billood ilmuhu wuxuu adeegsan karaa codkiisa si uu u yiraahdo erayo yar yar sida Mama ama baba.
Hadda waa marka ay habboon tahay in ilmaha lagu dhiirigaliyo inay hadaaqaan, tusaale ahaan haddii uu yiraahdo “Baba” in laga daba dhaho isla eraygii ilmuhu yiri oo la yiraahdo “aabe” , waayo la hadalka ilmaha waxay ku dhiirigalinaysaa ilmuhu inuu eray celin sameeyo.
Waqtiga cuntada adag loo bilaabayo ilmaha muran baa ka taagan, doodiina weli way socotaa, waayo khuburo ayaa qaba in loo bilaabi karo ilmaha cuntada adag marka uu gaaro 4ta bilood. Ilmaha nuuga naaska ama la siiyo caanaha gasaca ee carruurta way ku filan yihiin caanuhu ilaa inta uu gaarayo lixda billood.
Waxaa kale oo jirta in ilmaha qaar la soo boodi karaan xasaasiyada cuntada marka cuntada adag loo bilaabo. Inta badan khubaradu waxay ku taliyaan in loo bilaabo ilmaha cuntada adag marka uu gaaro lixda billood.
Xilligaan waxaa dhamaaday welwelkii hurdada ee waalidiinta, waayo ilmuhu wuxuu hadda hurdi karaa 6-7 saacadood oo xiriir ah. Waxay ilmuhu seexdaan habeenkii inta badan.
Ka ilaali dhallaanka yar ag keenida TVga. Khubaradu waxay isku raaceen inaysan maskaxda koraysa ee ilmaha aysan u wanaagsanayn in la daawadsiiyo TVga ilaa ay ka gaarayaan labo sanno.
Xilligaan waa marka carruurtu dhinacyada isku rogto markaa sarriir aan xirnayn ha kaga tagin ilmaha, waayo waxaa laga yaabaa inay ka soo dhacaan.
Bishaani waa bisha ay ilmuhu qaateen tallaalkii koowaad marka haddii aad ku aragto xasaasiyad tallaalku wato la socodsii dhaqtarkaaga.
Prev3 billood jir
next5 Billood jir